Shiinaha Warshad Baaba'isa Horizontal iyo alaab-qeybiyeyaal | Mashiinnada Delin
Model: DSC (R) Taxanaha Bamgaarka FGD
Xawaare (r / min): 550-740
Awoodda (l / s): 1083-2722
Madaxa (m): 26-27
Waxtarka ugu fiican: 85% -90%
La oggol yahay cabirka walxaha ugu badan (mm) ： -
Miisaanka bamka (kg): 4000-8300
Dheecaanka dia. (Mm): 500-800
Nuugista dia. (Mm): 600-900
Dareere Haamaha: 4, 5 Qalabka liner: Dareeraha chrome sare / Rubber
Nooca: - Waxyaabaha Casing: Birta tuur
Ballaca (mm): 700-1285 Qaabdhismeedka: Mashiinka mashiinka hal-mar ah
Hebei Delin Makiinado waa mid ka mid ah shirkadaha bamka ugu waaweyn ee ku takhasusay soo saarida bambooyin qulqulaya ee Shiinaha, oo leh dhul ka badan 40,000m2iyo aagga dhismaha oo ka sarreeya 22,000m2. Wax soo saarka waxaa badanaa loo isticmaalaa weecinta wabiga leexinta, macdanta, metallurgy, qorsheynta magaalada, korontada, dhuxusha, FGD, batroolka, warshadaha kiimikada, wax soo saarka dhismaha, iwm. Taxanaha DSC (R) FGD pump is a type of centrifugal pump, single- nuugid, hal-marxalad ah iyo qaab-dhismeed jiif ah, oo muujinaya faa'iidooyinka heerka socodka ballaaran, waxtarka sare iyo keydinta tamarta. Taxanaha bamka FGD waa nashqado is haysta oo meel lagu keydin karo. Sida soo saaraha bamka slurry xirfadeed iyo alaab-qeybiyaha ee Shiinaha, waxaan soo saarnay qalab kala duwan oo loogu talagalay DSC (R) taxane bambooyin FGD ah.
Astaamaha Mashiinka FGD
1. Tikniyoolajiyadda falanqaynta jilitaanka ee CFD ee socota ayaa loo qaatay qaybaha qoyan ee bamgareynta, oo leh qaab lagu kalsoonaan karo iyo karti sare. 2. Isku-hagaajinta isku-dhafka wax-ka-beddelka ayaa beddeli kara booska wax-qabadka ee xajmiga, ku haynta qaybta mashiinka xaalad wax ku ool ah oo wax ku ool ah.
3. Bambooyin taxane ah oo loo yaqaan 'DSC (R) Bambooyin FGD ah ayaa ka mid ah naqshadeynta dhinaca gadaasha gadaal, waxay leeyihiin qaab dhismeed fudud, waana sahlan tahay in la dayactiro. Looma baahna in lakala jaro dhuumaha iyo dheecaanka.
4. Wareegyo duub ah oo duub ah oo laba-saf ah ayaa lagu dhejiyaa dhamaadka bamka, isla markaana ku dhajinaya dhamaadka gawaarida. Dhalmada waa lagu saliiday saliid, waxay hagaajineysaa xaaladdooda shaqo iyo cimri-dheereynta adeegga.
5. Farsamada makaanikada waxaa si gaar ah loogu talagalay kaydadka mashiinka farsamada ee loo isticmaalo habka bamgareynta FGD ee DSC (R) bambooyin taxane ah FGD oo leh hawlgal lagu kalsoon yahay.
Waxyaabaha loogu talagalay DSC (R) Taxanaha FGD
Waxaan soo saarnay nooc cusub oo maadada ah - waplepletiple wajiga birta birta ah - oo si gaar ah ugu habboon aaladaha FGD. Hantida anti-abrasive ee birta ahama ee dabaqyada iyo caabbinta daxalka birta cad ee chrome sare, maaddadu waxay u qalantaa habka FGD.
1. Qalabka tuubbada, daboolka mashiinka iyo saxanka adabtarada ayaa qaadaya qaybo cadaadis ah oo ka samaysan bir ductile ah oo lagu dhejiyay caag.
2. Impeller, daboolka nuugista / gelinta safka hore waxay ka sameysan tahay wajiga dabaq bir bir cad aan lahayn.
3. Safka hore, safka dambe, galka gadaasha gadaashiisa waxay ka samaysan yihiin caag dabiici ah oo leh hanti ka hortag-xun oo wanaagsan, miisaan fudud iyo qiimo jaban.
Nooca Awood (Q) Madaxa (H) Xawaare (n) Wax qabad ŋ NPSH Dheecaan Dia./suction Dia.
Nooca A BB B D E1 E2 F * h1 h2 J K M * L1 L2 d Miisaanka (kg)
Nooca N P1 P2 S * T1 * T2 * U1 U2 DO2 DI2 n2 d2 DPC2 DO1 DI1 n1 d1 DPC1
Laba Xidhmada FGD Mashiinka
Marxalad keli ah Hal nuugid FGD saar